AirPods နီးပါးစွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် $30 တန် AirDots ကို Xiaomi မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
8 Nov 2018 . 3:46 PM
Xiaomi ကိုတော့ အရည်သွေးလည်းကောင်း ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်တဲ့ Smartphone နဲ့ Accessories ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် အသိများပါတယ်။ အရင်တုန်းက Budget ကနေ Mid-range တန်းပဲထုတ်ခဲ့ရာကနေ အခုဆိုရင် နာမည်လည်းရ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံပါးစပ်ဖျားမှာ Xiaomi ၊ Xiaomi ဆိုပြီး အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့ Apple စတိုင် Smartphone နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Wireless Earbud တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ Xiaomi အခေါ် Wireless AirDots ပါ၊ ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရင် AirPods လားလို့အထင်မှားသွားနိုင်သလို Function ပိုင်းနဲ့ တချို့အစိတ်ပိုင်းနေရာတွေဟာ Apple နဲ့တော်တော်လေးသွားဆင်ပါတယ်။ Tappable Controls ပါဝင်ပြီး Compact Charging ဒီဇိုင်းပါတယ်၊ Earbuds အနားသတ်ကို Silicone နဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ Sound Isolation ပိုင်းပိုကောင်းလာနိုင်ပြီး နားထဲ ပိုပြီးအံဝင်ခွင်ကျ တပ်ထားနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Made with Silicone Tips
နောက်ပြီး Bluetooth 5.0 ပါဝင်လာတဲ့ ဒီ AirDots ကို အခုချိန် $30 နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင်ဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ Wireless Earbud ကို စမတ်ဖုန်းနဲ့တွဲရောင်းမလားမသိရသေးပေမယ့် မကြာသေးခင်က $15 တန် Wireless Charger ကိုလည်းမိတ်ဆက်ထားတယ်။
Recently Announced Mi Mix3Smartphone
လတ်တလောသတင်းတွေအရ ဒီ Wireless EarDots နဲ့ Charger တွေဟာ မကြာခင်ရောင်းချတော့မယ့် Mi Mix3 Smartphone နဲ့ တွဲပါလာမယ့် Accessories ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
AirPods နီးပါးစှမျးဆောငျနိုငျမယျ့ $30 တနျ AirDots ကို Xiaomi မိတျဆကျလိုကျပွီ
Xiaomi ကိုတော့ အရညျသှေးလညျးကောငျး ဈေးနှုနျးလညျးသငျ့တငျ့တဲ့ Smartphone နဲ့ Accessories ထုတျလုပျသူအဖွဈ အသိမြားပါတယျ။ အရငျတုနျးက Budget ကနေ Mid-range တနျးပဲထုတျခဲ့ရာကနေ အခုဆိုရငျ နာမညျလညျးရ အနောကျဥရောပနိုငျငံပါးစပျဖြားမှာ Xiaomi ၊ Xiaomi ဆိုပွီး အောငျမွငျလာတဲ့အခါမှာတော့ Apple စတိုငျ Smartphone နဲ့တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျမယျ့ Wireless Earbud တဈမြိုးကိုမိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ Xiaomi အချေါ Wireless AirDots ပါ၊ ရုတျတရကျမွငျလိုကျရငျ AirPods လားလို့အထငျမှားသှားနိုငျသလို Function ပိုငျးနဲ့ တခြို့အစိတျပိုငျးနရောတှဟော Apple နဲ့တျောတျောလေးသှားဆငျပါတယျ။ Tappable Controls ပါဝငျပွီး Compact Charging ဒီဇိုငျးပါတယျ၊ Earbuds အနားသတျကို Silicone နဲ့ပွုလုပျထားလို့ Sound Isolation ပိုငျးပိုကောငျးလာနိုငျပွီး နားထဲ ပိုပွီးအံဝငျခှငျကြ တပျထားနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျပွီး Bluetooth 5.0 ပါဝငျလာတဲ့ ဒီ AirDots ကို အခုခြိနျ $30 နဲ့ တရုတျနိုငျငံမှာ မှာယူနိုငျပွီဖွဈပွီး မကွာခငျဖွနျ့ခြီသှားမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ Xiaomi အနနေဲ့ Wireless Earbud ကို စမတျဖုနျးနဲ့တှဲရောငျးမလားမသိရသေးပမေယျ့ မကွာသေးခငျက $15 တနျ Wireless Charger ကိုလညျးမိတျဆကျထားတယျ။
လတျတလောသတငျးတှအေရ ဒီ Wireless EarDots နဲ့ Charger တှဟော မကွာခငျရောငျးခတြော့မယျ့ Mi Mix3 Smartphone နဲ့ တှဲပါလာမယျ့ Accessories ဖွဈမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
by Min Than Htike . 11 hours ago
အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက် ပထမဆုံးသွင်းဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့ကြတဲ့ Icardi နဲ့ Dybala